I-Inkscape 1.0.2 iza nokuphuculwa kozinzo, ukulungiswa kwe-bug kunye nokunye | Ubunlog
I-Inkscape 1.0.2 iza nokuphuculwa kozinzo, ukulungiswa kwe-bug kunye nokunye
Uhlaziyo olutsha lwe-Inkscape 1.0.2 luyafumaneka Kolu hlelo lutsha, abaphuhlisi bachaza ukuba bajolise ekuphuculeni uzinzo, kunye nokulungisa iimpazamo, ukongeza kuloo nguqulo yeMacOS bayisebenzeleyo ukuphucula ukusebenza.
Kulabo abangayaziyo i-Inkscape kufuneka bayazi loo nto Isoftware yemizobo esemgangathweni yobungcali Isebenza kwiWindows, Mac OS X, kunye neGNU / Linux. Isetyenziswa ziingcali zoyilo kunye nee hobbyists kwihlabathi liphela ukwenza iintlobo ngeentlobo zemizobo, ezinje ngemifanekiso, ii icon, iilogo, imizobo, iimephu kunye nemizobo yewebhu.
Inkscape inezixhobo ezintsonkothileyo zokuzoba ezinokuthelekiswa neAdobe Illustrator, iCorelDRAW, kunye neXara Xtreme. Ungangenisa ngaphakathi kwaye uthumele ngaphandle iifomathi ezahlukeneyo zefayile, kubandakanya i-SVG, i-AI, i-EPS, iPDF, iPS kunye nePNG.
Umhleli ubonelela ngezixhobo zokudweba eziguquguqukayo kwaye unikezela ngenkxaso yokufunda kunye nokugcina imifanekiso kwi-SVG, i-OpenDocument Drawing, i-DXF, i-WMF, i-EMF, i-sk1, i-PDF, i-EPS, iPostScript, kunye neefomathi zePNG.
1 Inkscape 1.0.2 Iimpawu eziNtsha eziPhambili
2 Uyifaka njani i-Inkscape 1.0.2 kwi-Ubuntu nakwiziphumo?
Inkscape 1.0.2 Iimpawu eziNtsha eziPhambili
Ngexesha lokulungiswa kwenguqulelo entsha, se wanika ingqalelo ekhethekileyo ukuphucula uzinzo nokususa iimpazamo, kubandakanya ukusombulula ingxaki kokubhaliweyo kunye nokuphucula ukusebenza kwesixhobo se-eraser.
Kwakhona, intengiso iyayichaza loo nto ukusebenza kuphuculwe kwinguqulelo ye-macOS. Phakathi kwezinto ezintsha ezenziweyo, i Inkangeleko kuseto lokhetho ukucima ukukala ngokunqakraza iqhosha le mouse elisembindini kunye nokuthintela ukujikeleza kwelaphu uxwebhu olwahlukileyo okanye zonke iiwindows.
Kwangelo xesha Uvavanyo lwe-alpha luqale ngohlobo olutsha lwe-Inkscape 1.1, eye yazisa ngesikrini sasekhaya esamkelekileyo sesicelo kwaye inikezela useto olusisiseko njengohlobo lwe-canvas, umxholo, kunye neseti ye-hotkey, kunye noluhlu lweefayile ezisandula ukuvulwa kunye neetemplate zokwenza amaxwebhu obungakanani obuthile.
Olunye uluvo lubandakanya:
Ujongano kuseto lokukhangela ngesigqumathelo.
Iwindow pop-up xa ucofa u "?" ibhokisi yencoko yababini yokufaka imiyalelo evumela ukuba ubize imisebenzi eyahlukeneyo ngaphandle kokufikelela kwimenyu okanye ucofe amaqhosha ashushu.
Umboniso ogqumeneyo weSketch obonisa ulwandlalo kunye nomzobo ngaxeshanye
Uyifaka njani i-Inkscape 1.0.2 kwi-Ubuntu nakwiziphumo?
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ubunlog » software » I-Inkscape 1.0.2 iza nokuphuculwa kozinzo, ukulungiswa kwe-bug kunye nokunye
Ndisebenzisa i-Inkscape kuba i-vectorizer ibhetele kunezicelo zorhwebo.
I-DokuWiki, uyifaka njani le sicelo ku-Ubuntu 20.04